Weligaa ha luminin fursad!
Ku xidhnow suuqa mar walba oo leh madal dareen oo sahlan in la isticmaalo:
Waxaad heli kartaa 20-ka Disembar 2021 wixii ka dambeeya..
Cusub oo Hormarsan
Primus Akoonka Noocyada
Si gaar ah loogu talagalay in lagu waafajiyo baahiyahaaga
Dhimista ugu yar ee dhigaalka cusub ee ilaa 90%*
WAX BADAN IGU SHEEG
Ku xidhnow suuqa mar walba oo leh
madal dareen oo sahlan in la isticmaalo:
Waxaad heli kartaa
20-ka Disembar 2021 wixii ka dambeeya..
Ka ganacso in kabadan 120 aaladood oo ay ku jiraan
Forex, Tusmooyinka, iyo Sinaanta
Ganacsatada kala kula sugan dhamaan dunida waxay isticmaalan online trading si ay uga faa’idaystaan suuqa ugu balaadhan dunida, oo lagu kala ganacsado maalintii 6 trillion. Tikniyoolajiyadda casriga ah ee maanta waxay u oggolaaneysaa ganacsatada Forex, Commodities, Energies, Indices iyo Stocks, inay si fudud uga ganacsadaan hal gujo oo ku dhajiyaan mobile/laptop iyo internet. Baadh alaadaha maaliyadeed ee kala duwan si aad u barato adeegyada aanu bixino iyo spreads weheliya, adigoo kala duwaya saladaada ganacsiga.
Wax ku saabsanForex
KA GANACSO MACDAHA QAALIGA AH
Wax ku saabsan Tamaraha (Energies)
FXPRIMUS waxay bixinaysaa aaldaha Energy dhamaan macaamiisheeda daafaha caalamka ku taxa, iyadoo u ogolaanaysa ganacsatadeeda inay ku trade ku gareeyaan Crude Oil, Natural gas, Heating oil, Ethanol iyo Purified terephthalic acid. Ka ganacsiga tamarta waa mid ku lug leh iibsashada, iibinta iyo kasoo dhaqaajinta tamaraha halkii laga soo saaray, keenida halka looga baahan yahay.
Wax ku saabsan Saamiyada (Equities)
FXPRIMUS waxay bixisaa future contracts oo la xiriira biraha qaaliga ah, Indices iyo Commodities. Ku ganacsato mid ka mid ah aaladaha kala duwan ee future contracts aanu bixino, fiirso wakhtiga ay kuu fulayso ee taariikhaha dhicitaanka sanadka oo dhan.
Wax ku saabsan Indices
Wax ku saabsan Futures (Aaladaha Maaliyadeed ee laga ganacsado)
Faa’iidooyinka La Ganacsiga FXPRIMUS
Maareynta akoonkaaga Shakhsiyeed
Ka Hortaga in Lacag lagugu Yeesho
Muuqaalka Suuqa Maalinlaha ah
Gacan 3-aad oo kormeeraysa la bixitaanada Lacagta Macmiilka
Helitaanka Daraasadaha Suuqa oo Bilaash ah
Helitaanka Casharo Fiidiyaw ah
Raac Istaraatijiyadaha & Ganacsiga Suuqyada Maaliyadeed
Ku noqo PAMM MASTER dhawr tillaabo oo fudud.
Ku noqo PAMM FOLLOWER dhawr tillaabo oo fudud.
Ku Ganacso Waqti Kasta Meelkasta
MT4-ga Windows & Mac oo ay ku jiraan iPhone, iPad & Android.
Ka ganacso in kabadan 120 aaladood.
Oo ku hel ilaa $10000 halkii akoonba
Ku biir Oil